Imibhangqwana eminingi ngesikhathi bezoziphatha zabo zobulili usebenzisa ukuphila kube mnandi kuphela ekhethekile, kufakwe endaweni yawo Lubrication zemvelo. Lezi ezikhethekile amathuluzi imboni hlobo usizo balahle i ukuzwa abuhlungu ukoma enqubeni oxhumana nabo kodwa futhi sikwazi ukuxazulula eziningi nezinye izinkinga. Nokho, kuthiwani uma ngesikhathi esifanele lokhu gel kwakungelona naye? Kungenzeka yini ukuba esikhundleni sako amakhambi ngokurhaba noma yemvelo? Futhi engasetshenziswa esikhundleni amafutha?
ulwazi olujwayelekile mayelana nokusetshenziswa zokugcoba
Okokuqala, ake sibone ukuthi yini okuthiwa emangalisayo igrisi obuseduze. Ngokuvamile kuba ijeli, ukhilimu, ibhotela noma ubisi nabanye substrate viscous futhi olumanzi. Into kusho esikhundleni okungenzeka zemvelo Ukukhetha uketshezi zesifazane ebanjwa esimweni excitation umlingani. Ngokusekelwe lokhu, thina ukhethe lokhu okulandelayo imisebenzi ifektri zokugcoba:
adale ifilimu elincanyana zokuzivikela, okuyinto kusiza ukuvikela umthondo kwabo bobabili abashadile yokulimala ezincane kanye nezinye ezincane ezingaba zenzeka lapho "ezomile" contact;
ukuqinisekisa lula ngokuhambisa ukuxhumana nomunye umthondo;
ukukhululeka ukungakhululeki ngesikhathi ukusondelana;
ukudala ukuvikelwa izifo ezidluliselwa ngocansi (ngenxa yokuba khona kule igrisi izithako isinqandakuvunda);
azidlulisele emizweni ezengeziwe eziholela ukwanda isimo excitation;
ukuhlinzeka ukunakekelwa isikhumba nokuzwela isibunu.
Iqiniso lokuthi ungasebenzisa esikhundleni ukuphila kube mnandi kuphela siqu, futhi yini cha, khulumani.
Kungenzeka yini ukuba esikhundleni ukhilimu amafutha massage noma uwoyela?
Ukuze ukubhekana umbuzo esikhundleni okungenzeka igrisi siqu kufanele ukubhekana imibono yayo. Sekukonke, zingase zihlukaniswe amaqembu amathathu kwezimali:
ekhiqizwa base oily;
wenza okusekelwe abicah.
Kubhekwe le mininingwane, lo mbuzo olandelayo: "Ngingakwazi ukusebenzisa ukhilimu esikhundleni amafutha?". Ngokusho kochwepheshe, esikhundleni ezinjalo kuvunyelwe. Kulokhu kungcono ukusebenzisa ukhilimu massage noma uwoyela. Nokho, kukhona omunye "kodwa".
Ngaphambi isicelo zone obuseduze, kudingeka uhlole ngokucophelela ukwakheka kwamakhemikhali lezi zimali. Ngokwesibonelo, kubalulekile ukuba ayiyeke le okhilimu kanye amafutha ehlanganisa menthol, peppermint, futhi upelepele obomvu, lwesinaphi, kanye nezinye izithako ne Ukupholisa ngomoya oqinile noma ukufudumala ukusebenza. Kungenjalo, umuzwa esivuthayo noma ukuluma ukukhanya ebandayo esikhumbeni ngeke uvumele wena nomlingani wakho ukuba ugxile.
Engasetshenziswa esikhundleni siqu igrisi ekhaya: iresiphi elula
Akukholeki ingcina futhi esigubuzele, futhi okubaluleke kakhulu, izakhiwo noma ngokuhambisa angase abe hhayi kuphela izindlela abendlu chemical izimpahla, kodwa futhi isithelo abavamile. Ubani nje nempela owayeke wacabanga ukuthi ukuphila kube mnandi kuphela emangalisayo ingalungiswa kusuka imikhiqizo elele esiqandisini futhi nganoma iyiphi indlela owenziwayo.
Ngokwesibonelo, bewazi yini ukuthi ungasebenzisa esikhundleni ukuphila kube mnandi kuphela siqu banana sesivuthiwe futhi kwamanzi agobhozayo? Ngokuba ukulungiswa igrisi ezinjalo kumele enze izinyathelo ezilandelayo:
ukuthatha banana sesivuthiwe futhi amakhasi it kusukela isikhumba;
Sika banana emibuthanweni amancane wakufaka blender;
ugaye izithelo blender kanye slurry wafakwa isiphi isitsha esincane (embizeni ingasetshenziswa kusukela ukhilimu);
Engeza ingxube banana ku amanzi kancane esihlwabusayo.
igrisi Yemvelo ngomumo. Inzuzo enkulu zindlela ungaphakathi engokwemvelo yayo kanye nokungabi khona kwanoma yiliphi ukusabela uhlangothi. Lokhu kungenxa yokuthi ubhanana, njengoba umthetho, akakubangeli komzimba. Akukona obulimaza, futhi moisturizes isikhumba. Futhi, njengoba elungiselela ukwakheka edliwayo ngokuphelele, ukuphelela ukuba wamukeleke, ubulili bomlomo ukuthethwa kwecala. Nakhu ingasetshenziswa esikhundleni amafutha.
igrisi Original yesitashi amanzi
A ehlukile omkhulu zokwenziwa igrisi inhlanganisela isitashi-amanzi. Ukuze indalo yayo, kufanele uthathe isitashi esincane, usigcwalisa esilinganayo amanzi kanye gqoka umlilo. Okulandelayo, uzobona kuphela kufanele kuvuse kuke kuze kube uqweqwe.
Uma Pudding yakho sikhula, kutuswa ukususa ekushiseni nendawo endaweni epholile uze cool ngokuphelele. Lasekuqaleni ketshezi petrolatum esikhundleni induduzo obuseduze ngomumo. Kakhulu ukuvumelana alube. Kodwa Ungayisebenzisa uwoyela esikhundleni amafutha? Futhi lokho kulokhu efanelekayo? Cabangela eminye.
Isexwayiso! Ukusebenzisa izindlela bendabuko ekwenzeni igrisi okuzenzela, baqaphele. Landela imiyalelo futhi Ungeqisi it ne umthamo. Khumbula ukuthi izingxenye ayingxenye nokusebenzisa kwakho imikhiqizo baxabane nomzimba nokuvuvukala.
Lubrication Simple ngamafutha
Ukuya emuva yokuthi ungasebenzisa esikhundleni le uwoyela ubulili, udinga ukukhumbula mayelana izindlela base oily. Kulokhu, ungakwazi iphendukele umuntu kulokho onakho, uwoyela organic. Ngokwesibonelo, le njongo ngeke asondele Sesame, kakhukhunathi, yefilakisi noma umnqumo.
Ngokuba ukulungiswa okunjalo ukuphila kube mnandi kuphela kumelwe ulungiselele epanini amancane endishini, okuyilona elidingekayo ukuze bafake mayelana 5-10 wezipuni ibhotela. Khona-ke kudingeka uthele imbiza ukukha amanzi, agcwalisa ethangini amafutha ibekwe ngenhla.
Ngokulandelayo, ukubeka igrisi azayo umlilo (Kufanele uthole okugeza amanzi) kanye nokushisa ketshezi. Sekukonke, le ukulungiselela kuzokusa Ningabizi lutho ngaphezu imizuzu 15-20. I-ejenti abilayo Ungaphinde ungeze amaconsi ambalwa amafutha abalulekile noma yiluphi uhlobo aphrodisiac ketshezi. Njengoba ubona, saba mnandi obuhle kakhulu izakhiwo beya.
Isexwayiso lapho esebenza amafutha (ibhotela, uwoyela yemifino, imajarini)
Ukusetshenziswa zemifino amafutha namafutha akuzona njalo ngokulinganayo wusizo ayiphulule yakho obuseduze. Ngokwesibonelo, abashadikazi abaningi banesithakazelo ukuthi kungenzeka ukusebenzisa ukuphila kube mnandi kuphela esikhundleni amafutha sunflower, ibhotela noma imajarini ukuyisebenzisa? Ngekucabanga - "yebo", ngoba zonke lezi imikhiqizo babe kakhulu izakhiwo beya.
Nokho, kufanele kuqondwe ukuthi izingxenye izisekelo idatha azihloselwe ukusetshenziswa endaweni zangasese. Yize bayafana lonke lamafutha, akuvumela ukuthi umbukiso futhi balahle ukoma, ukuhlukunyezwa kungaholela ngempela kube nomphumela omubi. Ngokwesibonelo, kukhona ingozi ukuze uthole ukucasuka ngisho ukuvuvukala nolwelwesi lwamafinyila. Ngakho-ke, ukusetshenziswa imikhiqizo engenhla akunconywa odokotela nezinye Ochwepheshe.
Ngaphezu kwalokho, la mafutha ongabhubhisa isakhiwo se-latex, eholela ukuphazamiseka ubuqotho bayo.
Ngingakwazi ukusebenzisa ingane elangeni gcoba?
Eminye imibhangqwana abathi engasetshenziswa esikhundleni sohlelo anal igrisi baby cream. Lesi sahlulelo kuyiqiniso futhi ngesikhathi esifanayo ngephutha. Ngakho, ngakolunye uhlangothi uhlobo igrisi moisturizes futhi angena isikhumba. Yilokho nje kuhle kangakanani, uma isetshenziswa phezu yangaphandle.
Ngezinye oxhumana okujulile le mucosa zangasese kanye ukhilimu ayikwazi ugxile. Ngenxa yalokho, phakathi ungahlala izingxenye amanoni zingaxazululeki ithuluzi, okuzoba engokwemvelo ephelele ezihlukahlukene namagciwane abangela izifo kanye nesikhunta.
Ngaphezu kwalokho, ukusetshenziswa ukhilimu fat-aqukethe kuholela ekubhujisweni kwesimiso impahla kuyiphi ikhondomu eyenziwe ukuthi kungase kukhinyabeze ubuhlobo bakho zobulili.
Kuphephe kangakanani ukusetshenziswa ongahluziwe jelly?
Enye i-ejenti eziyihlazo, okuyinto ngakho wayevame izinduna abangaphansi, ongahluziwe jelly. Kutsengeka nokutholakala efanelekayo isakhiwo viscous ukwazi lula ukuhamba ngokuhlangana ngokocansi, kubangela imibhangqwana eminingi cabanga uyisebenzisa. Kodwa ingabe okuhle futhi ephephile, njengoba besho ngaye? Ake uqale nge yokuthi leli thuluzi kunzima kakhulu ugeze off. It hhayi kuphela uhlala phezu kwesikhumba, kodwa ishiya ebukekayo amafutha ndawo, kuzwakala ku izingubo zangaphansi.
Ngaphezu kwalokho, ukusetshenziswa ketshezi kungaholela ukuphazamiseka microflora evamile sangasese umlingani wakho. Ngenxa yalokho, kungaholela ukubuyabuyelela kanye ekuqongeleleni amagciwane athile kanye nesikhunta. Ngaphezu kwalokho, ngezinye izikhathi ukusetshenziswa ithuluzi kubangela reddening ngisho avuthayo ezihlahla isikhumba. Ekugcineni, petrolatum ebhubhisa ungqimba zokuzivikela kwekhondomu kanye umonakalo. Kuyefana nasendleleni esetshenziswa ubulili amathoyizi.
Amacebiso awusizo lapho usebenzisa igrisi okuzenzela
Ake sithi uyazi ukuthi ungasebenzisa esikhundleni amafutha ekhaya. Ngokwesibonelo, okukhethayo uwile phezu kwamanzi, futhi banana kwengoma. Yini okulandelayo? Ukusetshenziswa kwalesi igrisi iphephile uma ulandela izimiso ezimbalwa ezilula. Okokuqala, kufanele indlela isicelo ukuhlanza futhi yomile umzimba usule. Okwesibili, kufanele ukusakaza thinly engasindi promakivat ukunyakaza. Okwesithathu, ngemva isicelo of the ukwakheka banana ungakhohlwa ukugeza ngaphansi egijima amanzi ezilinganisweni.
Elinye iphuzu elibalulekile: okuzenzela igrisi asifanele ukusetshenziswa nsuku zonke. Naphezu kweqiniso lokuthi iningi izithako ezisetshenziswa ungeyena allergen, ukusetshenziswa kwabo njalo kungaba avuse ukusabela okungekuhle emzimbeni wakho. Ngokwesibonelo, ungahlukumezi amafutha isitashi. Khumbula ukuthi le ketshezi ubhekwa enhle kakhulu yokuzalela umhlabathi wokusakazeka nezilwanyana ezincane ezihlukahlukene athile kanye nesikhunta.
Kuthiwani uma kukhona izinkinga?
Uma usebenzisa amafutha ekhaya, silalela imizwa yakho futhi impendulo. Uma kamuva uhlangabezana ukungakhululeki (futhi ingabe usekhona ngisho nangemva yithela), kunconywa ngokushesha uxhumane nodokotela wakho.
Manje uyaqonda ukuthi ungasebenzisa esikhundleni amafutha amanye izithako zemvelo. Nokho, ukusetshenziswa kwabo kuhlobene nengozi ezithile futhi, nabo bonke ubunzima.